Akazisoli owe-Ajax ojoyine iSundowns
UMDLALI osemncane we-Ajax Cape Town, uGrant Magerman ozodlalela iMamelodi Sundowns ngesizini ka-2020/2021. Isithombe: BACKPAGEPIX
AKANALO noluncane uvalo ngesinqumo sakhe sokusayina inkontileka yesibambiso neMamelodi Sundowns umdlali osemncane we-Ajax Cape Town, uGrant Magerman, yize kukhona abamsabisa ngokuthi uyobulala ikusasa lakhe ebholeni, eChloorkop.
UMagerman usewumdlali wesibili kwabathathu umqeqeshi weSundowns ayebamemezele sakugigiyela. Omunye walaba badlali uGeorge Maluleka weKaizer Chiefs kanti noLesedi Kapinga weBlack Leopards uyamkhomba umunwe.
Lo mdlali we-Ajax okhona naseqenjini labaneminyaka engaphansi kwengu-23 kanti uke wadlala kwiNdebe yoMhlaba ka-Under 17 neka-Under 20, usesalelwe izinyanga ezimbalwa kwi-Urban Warriors ngaphambi kokuthi ajoyine iSundowns uma kuqala isizini entsha.
Engxoxweni asanda kuba nayo ne-Independent Media, uMagerman ukubeke kwacaca ukuthi ungumuntu ozethembayo ngakho bonke laba abamsabisa ngokuthi uyobulala ibhola lakhe bayamkhuthaza.
KwiSundowns, uMagerman uyobanga isikimu no-Andile Jali, Hlompo Kekana, Tiyani Mabunda, Sammy Seabi noMaluleka, azobe efika naye. Ngokusho kwalo mdlali kukhona ababona lokhu njengephutha, noma uyela imali kodwa uyoshikisha ibhentshi kwiSundowns.
“Ngiyakholelwa kimina futhi ngikholwa ukuthi isinqumo sokujoyina iSundowns sifanele. Yebo, bakhona vele ababona sengathi ngiyophela kwiSundowns kodwa lokhu akungikhubi. Kuyangikhuthaza eqinisweni. Ngiya kwiSundowns ngokwazi ukuthi ngizosebenza ngakho konke enginakho, ngilwele indawo yami,” kusho yena.
Nakuba kubukeka kuwumqansa ukufika kwiSundowns wenze isikimu sibe esakho kodwa umlando wabadlali abasuka eKapa beya kwiSundowns iningi labo lifike lenza kahle.
“Buka indlela enze ngayo uKeagan (Dolly) esuka kwi-Ajax. Kuyefana nasendleleni okwenzeke ngayo kuRivaldo (Coetzee) ngaphambi kokuthi ahlushwe ukulimala. Abadlali abafana noMosa (Lebusa) kufanele bangiqinise idolo ngokuthi nami ngingenza kahle yinqobo nje uma ngizosebenza,” kuqhuba uMagerman.
Okungasiza uMagerman kwiSundowns ukuthi uKekana noTiyani Mabunda bayakhula kanti yena uphiwe ukukwazi ukudlala ezindaweni eziningi maphakathi nenkundla. Kule sizini uthwele amathemba e-Ajax ukuthi idle isicoco seGladAfrica Championship lapho begenqeza khona phambili ngamaphuzu ayisikhombisa. Ube nesandla esikhulu nyakenye iqembu lakuleli lika-Under 23 lizibekisela indawo kuma-Olympic.
“Ngiyaziqhenya ngokujoyina iqembu elifana neSundowns. Wonke amandla ami asekusizeni i-Ajax okwamanje kodwa uma sengiqedile ngijabulela ukuthi sengizoqala impilo entsha eqenjini elidla izicoco ngisho ezase-Afrika.
“Isifiso sami ukuwina izicoco (inkanyezi yeCAF Champions League), ngidlalele iqembu lami lesizwe,” kusho yena.